Garmin पुलिस चेतावनी | Martech Zone
गार्मीन पुलिस चेतावनी
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 1, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
दिनको लागि यहाँ मेरो अरबौं डलर छ!
के हुन्छ यदि गार्मिन (वा अन्य स्वत: म्यापि devices उपकरणहरु को कुनै) लेजर/राडार डिटेक्टरहरु मा बटन को साथ एक गति जाल वा पुलिस को स्थान रिपोर्टिंग कब्जा गर्न को लागी कब्जा गर्न को लागी बनाईएको हो? यस तरीकाले, यो भन्दा पहिले कि म पनी गति जाल वा एक संरक्षित चौराहे मा जान्छु, मेरो यन्त्रले मलाई चेतावनी दिन्छ कि मँ दायरा मा हुनु भन्दा पहिले। यदि लेजर/रडार यो उठाउँदैन, कसैले अझै बटन को माध्यम बाट यो रिपोर्ट गर्न सक्दछ। रिपोर्ट एक टाइमर मा हुन सक्छ ... मात्र देखाउन को लागी यदि घण्टा भित्र रिपोर्ट गरीयो।
म एक स्पीडर होइन, तर मँ आफैंलाई १ टिकट हरेक १ वा २ बर्षमा पाउँछु। एक महान ड्राइभि record रेकर्ड संग, म कहिल्यै एक ब्रेक पाउन। यसले मलाई परेशान गर्दछ किनकि छिटो टिकट कम खराब ड्राइभरहरु लाई ढिलो गर्न को लागी र सुरक्षित र क्षेत्र को लागी राजस्व उठाउने को बारे मा अधिक छ। त्यो टिकट को लक्ष्य हुनु हुँदैन।
नतिजाको रूपमा, म उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने माध्यम मन पराउँछु। यदि म यस जस्तो उपकरण खरीद गर्न सक्थें भने, म भोली गर्छु!
लामो पूंछ: gapingvoid.com बाट हास्यास्पद कार्टुन